डियर कामरेड बिशाल तिमी मारिएको हल्ला जब गाउँभरी फैलियो (भिडियोसहित)
प्रकासित मिति : २०७६ फाल्गुन २७, मंगलवार २२:५० प्रकासित समय : २२:५०
तत्कालीन माओवादीले कालिकोटको पिलिमा भिषण आक्रमण गर्यो । आफ्नै जिल्लाको पर कुनामा भएको लडाइँको धमका रातभरि आई नै रहयो । भुकुम्पको जस्तो लाग्ने बमको कम्पनले जमिन भन्दा उनको मन बढि हल्लाउँथ्यो । सबैभन्दा बिशालु हुन्छन आफना प्रिय मान्छेका अप्रिय खबर ।
उज्यालो होउन्जेल गोलीका आवाजहरू आउन छोडेनन् । डयाङ….. ड्याङ… धुम्मम… बमका आवाजले कान गुन्जायमान भएको थियो । आकाश पातल थर्कायमान बनायर जान्थ्यो । कालिकोटको पिलिभन्दा केही दुरी टाढा कोटिलामा चन्द्रा शाहिको मन पात पात हुन्थ्यो । युद्धको कमाण्ड गरिरहेका जीवन साथी कामरेड बिशाललाई केही हुन्छ कि ? चन्द्रा रातभर निदाइनन् ।
कसरी लाग्नु निन्द्रा पनि घरि उता घरि यता पल्टिदै बिहान भयो । मोर्चाको कमाण्ड सम्हालेका आफ्ना श्रीमानको अबस्था कस्तो रहयो । खुलदुलीले नै बिहान भयो । उनले त्यो रात कसरी बित्यो भन्ने पत्तै पाईनन । सबैभन्दा जिवनकै लामो लागेको थियोे त्यो रात ।
जब खोरमा रहेको भाले बास्यो ….
रातभर जागाजागा आँखाले परेली झिम्क्याउन पाएका थियनन् । जिवनको सबैभन्दा लामो लागेको रात थियोे । जब बिहान भयो रातभरि लडेका फौँजको लाइन गाउको मुन्तिर लाग्यो चन्द्राका आखा त्यो लाइनमा हिडिरहेका सिपाहीका नजरमा नजरमा डुल्न थाले । कहाँनेर विशाल हिडिरहेका छन । कसरी हिडिरहेका छन । उनको मनमा खुल्दुली पस्यो । धेरै फौज अगाडि बड्यो तर कतैपनि बिशाललाई देखिनन् । मनमा निराशाको बादल मडारिन सुरु गर्यो ।
गाउँमा फैलिएको त्यो हावा
गाउँमा सनसनी हल्ला फैलियो पिलि आक्रमणमा बिशालको मृत्यु भयो । एकान दोकान मैदान गर्दै त्यो हल्ला चन्द्राको कानमा पुग्यो । चन्द्राको मन चिसो भयो । उनि शंका र बिश्वासको मझधारमा उभिइन । नभन्दै गाउँमा सेनाको फौज पुग्यो लाइनभर उनका श्रीमान बिशाल अर्थात महेन्द्र बहादुर शाही कामरेड बिशाललाई कतै देखिनन् । मनको घडिले १२ बजायो । पत्याउनु र नपत्याउनुको मझधारमा उभिइन ।
घरको आगनमा भारी सन्त्रास बोकेर मुला केलाईरहेकि थिइन । आँगनमा बिशालका साथी रमेश कोइराला टुप्लुक्क आइपुगे । जो अहिले उनका राजनितिक सल्लाहाकार छन । आश्चार्यको कुरा के थियोे भने उताका पनि क विशाल र रमेश मिल्ने साथी थिए । उनिहरू कमाण्डर कमिसार थिए । घर आउँदा कयौंपटक बिशाल र कोइरालासंगै आएका थिए । बिशालका एक मिल्ने साथी पनि थिए कोइराला । कोइरालाको उपस्थीतिले झन निरासाको बादल मडारियो । उनले चाहेर पनि सोध्ने हिक्मत गरिनन् ।
उनिहरू प्रायः संगै हुन्थे ।
आँगनीको डिलमा पुगेका कोइरालालाई चन्द्राले प्रश्न तेर्साइन खै तपाईको साथी ? किन संगै लिएर आउनु भएन । कोइरालाले जवाफ दिए पछाडि हुनुहुन्छ आउदै हुनुहुन्छ । अँह चन्द्राले पत्याइनन् । पत्याउन पनि कसरी ! बिशालको मृत्यु भएको खबर गाउँभरी फैलिसकेको छ । मान्छेहरू कानेखुसी गरिरहेका छन । कोइरालाको भौतिक उपस्थितिले चन्द्राले ठानिन पक्कैपनि बिशालको मृत्यु भएकै रहेछ ,उनी खबर बोकेर सम्झाई बुझाई गर्न पुगे । त्यतिबेला चलन पनि त्यस्तै थियो ।
माओबादी छापामार युद्धमा मारिए भने,उनका सिनियर कमाण्डर वा मिल्ने साथी शहिदको खबर बोकेर घर घरमा पुग्थे । चन्द्राले नपत्याउन पनि कसरी ? संयोग या मौका त्यस्तै परेको थियोे । कोइरालाले अनेकौं बहानाबाजी गरेर सम्झाए चन्द्राको मन थामियन ….. आखाभरी आसु छचल्कियो । उनी भावुक बनिन् । पिडाको गहिरो आहालमा डुबिन । डियर कामरेड बिशालको सम्झनामा उनका आँखा निक्कै रसाए ।
जब घरको आँगनीमा महेन्द्र बहादुर शाही (विशाल) टुप्लुक्क पुगे…
कोइरालाले भनेको कुरा सत्य थियोे । उसोत गाउँभरी फैलिएको हल्ला पनि सत्य नै थियो । मात्र संयोग थियो पिलिमा मृत्यु भएका विशाल अनेत्र कतैका कामरेड बिशाल थिए । उनि अछामक थिए । कामरेड विशाल अर्थात महेन्द्र बहादुर शाहीले आफ्नो फौजलाई रातभर लडायर बिजय गरायर बिजयको झन्डा बोकेर आएका थिए ।
उनी साच्चै मृत्युुलाई जितेर घरको आगनीमा पुगेका थिए । जब घरको आगनीमा गाउँभरी चलेको हल्लालाई असत्य सावित गर्दै विशाल अर्थात महेन्द्र बहादुर शाही उभिए चन्द्रा बिशालको अंगालोमा बाँधियर भक्कानी भक्कानी रून थालिन । त्यो पल कुनै हिन्दी सिनेमाको अब्बल कारूणिक क्षण भन्दा कम थिएन । अहिले पनि ती क्षणहरू सम्झदा चन्द्राका नयन यसरी पग्लिन्छन ।
महेन्द्र बहादुर शाही उतिबेला बिशाल उपनामले चिनिन्थे । कयौँ ठाँउ मृत्युको चौघेरामा उभिएका शाहीले बिताएको युद्धकालिन जिवन पनि कम घत लाग्दो छैन । जिवनका निक्कै उत्तार चढाब ब्यहोरेका शाही जस्तै उनकी धर्मपत्नी चन्द्रा शाहीले पनि उतारचढाब ब्यहोरिन । शाहीकै कारण कयौँ पटक प्रहरीमा तारीख बोक्नु पर्यो । गाउँमा सेना प्रहरी प्रबेश गरे पहिलो निशानामा पर्थिन चन्द्रा ।
पर्दा पछाडि ब्यहोरेको दुखका अतिसय गाठाँ फुकाउँदै चन्द्रा निक्कै भाबुक हुन्छिन । आन्दोलनमा कमाण्डरकी श्रीमती भएर मोल्नु परेको कष्टको हिसाब कसैसंग छैन । छ त केवल मुख्यमन्त्री र सांसदकी श्रीमती भएको रोष अनि गुनाँसो ।
निसीखोला गाउँपालिकाकामा गएको पहिरोमा परी तीन जनाको मृत्यु
बागलुङ, निसीखोला गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा गए राति गएको पहिरोमा परी तीन जनाको मृत्यु भएको
भरुवा बन्दुकसहित दुई दाजुभाइ पक्राउ
पाल्पा, पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–३ भुवनपोखरीको बल्गामा अवैध भरुवा हतियारसहित दुईजना आज पक्राउ परेका
प्रेम अनि पौरख
२०७७ श्रावण ३१, शनिबार १५:४१
२०७७ श्रावण ३१, शनिबार १५:०३
२०७७ श्रावण ३१, शनिबार १४:४४
प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी मोदीबीच फोन वार्ता
२०७७ श्रावण ३१, शनिबार १४:२६
२०७७ श्रावण ३१, शनिबार १३:४२